Apple inotevera smartwatch haizoonekwe kwemimwe mwedzi mishoma, pamwe padivi peiyo iPhone 12 mhando, asi kuchine runyerekupe rwakawanda kutenderera pamusoro pezvatingatarisira.
Hezvino zvese zvatakanzwa kusvika parizvino nezve Apple Watch Series 6, pamwe neicho tarisa OS 7 inosimbiswa kuunza pamwe nayo.
Iyo wachi itsva ichave iri kumhanyisa Apple WatchOS 7, iyo yakafanoonekwa munguva yaApple chaiyo yekuvandudza musangano pana 22 June.
Pakupera kwaSeptember / kutanga kwaOctober zvinoratidza izvozvi zvinofungidzirwa
Zvimwe October kutanga
Izvo zvakati, Apple yasimbisa iyo iPhone ichanonoka ne "mashoma mavhiki" saka isu tinotarisira kuti iyo Watch Series 6 ichinonoka, pamwe ichizotengeswa muna Gumiguru panzvimbo.
Isu taimbofanotaura nezve iPhone uye Apple Watch chiitiko chaizoitika musi wa 8 Gunyana 2020, asi ikozvino tinotarisira kuti chiitiko chiitike kunopera kwaGunyana, kutanga kwaOctober.
Isu tinotarisira zvakare huwandu hwehutano uye hwekugwinya, pamwe nekutora zvakada Garmin iine mamwe mabasa ekumhanya sekutevera cadence semuenzaniso. Garmin zvakare anoita basa rakakura rekugonesa vashandisi kugovana kumhanya kwavo kana chiitiko kuti tirege kushamisika kuona Apple ichibvisa shizha kubva mubhuku iri. Imwe runyerekupe iyo inoramba ichidzokororazve kugona kuongorora ako eropa okisijeni mazinga, asi izvi zvinoda imwe nyowani Hardware, iyo iyo Series 6 inonzi ine kuuya kwayo.
Tinoda kuona mabhatiri achigadziridzwa kuti afanane nemamwe smartwatches mumusika, fanika iyo Samsung Galaxy Watch uye tinodawo kuona kurara kuchiteedzana pane akateedzana 6, pamwe nekungofamba kugona. Apple yakaratidza kurara kwekutevera sechikamu chewatch OS 7, saka tinoziva kuti iri kuuya neimwe nzira asi haina kutaridzika kunge ichave yakadzama semamwe madivayiri ari pamusika.
Tarisa OS 7: Ndezvipi zvinhu zvitsva zvavari kuuya?
Apple yakazivisa tarisa OS 7 panguva yeWWDC musi wa22 Chikumi, ichizivisa zvinoverengeka izvo zvichauya kune vekare Apple Watches pamwe neiyo nyowani. Unogona verenga zvakawanda nezvewindo OS 7 mune yedu yakasarudzika chimiro, asi heino kuputswa kwezvinhu zvitsva zvepamusoro zvaachauya nazvo.
Zvimwe zvinogoneka zviso zvewadhi
Zvinogovaniswa zviso zvewadhi
Kutenderera kutenderera nekutendeuka nzira muMamepu
Chiitiko chebasa chinodzoserwa kuFitness app
Kugona kutevedzera Dhanzi sekuti unoshanda, pamwe nekutonhora pasi uye kushanda kwesimba
Mhepo pasi mamiriro ekugadzirira kuti ugadzirire pamubhedha
Siri zvinowedzera, zvinosanganisira kushandura
Kugeza-ruoko tracking ne 20-yechipiri kuverenga pasi nguva
Zvizhinji zvekudzivirira kwekunzwa maficha
Apple Watch Series 6 runyerekupe: Chii chaitika kusvika parizvino?
1 Nyamavhuvhu 2020: Apple Watch Series 6 mabhatiri anoonekwa pane ekuzivisa zvitupa
MySmartPrice yakarehwa kuti akati wandei Apple mabhatiri akaonekwa pane akati wandei certification mawebhusaiti, kusanganisira UL Demco ine nhamba yemhando A2327.
Iyo saiti inoratidza iyi nhamba yemhando inogona kuverengerwa mune imwechete yakasarudzika yeApple Watch Series 6, ine huwandu hwe303.8mAh, iyo ingave yakakura kupfuura iyo Yekutarisira 5.
31 Chikunguru 2020: Apple Watch Series 6 inogona kuratidza ropa okisijeni sensor
Chinese kubuditsa Digitimes kwakataurwa izvo zvinyorwa zvaro zvave zvichidana iyo Apple Watch Series 6 ichauya neropa okisijeni sensor pane.
31 Chikunguru 2020: Apple inobvuma iyo inotevera iPhone haizovhura iyi Gunyana
Apple yakasimbisa mune yayo yechitatu-kota yekuwana mari yekufona kuti yaizounza inotevera Yefoni nhete zvishoma gare gare gore rino.
Apple CFO Luca Maestri akati: “Gore rakapera takatanga kutengesa maPhones matsva mukupera kwaGunyana; gore rino tinotarisira kuti zvinhu zvichawanikwa mumasvondo mashoma anotevera. ”
22 June 2020: Apple inotarisa tarisa OS 7 paWWDC
Apple yakaratidza akati wandei weruzivo rwunenge ruchiratidzika sechikamu chewatariri OS 7 software yekuvandudza iyo inosvika e gare gare gore rino, kusanganisira kurara kutsvaga.
30 Kubvumbi 2020: Apple Watch Series 6 inoratidzira kuvuza kunongedza ropa okisijeni kutarisisa
Tweki yaoneka kubva YouTuber @NikiasMolina ichiti inoratidzira zvimwe zvezvinhu zvinouya kuApple Watch Series 6. Iyo tweet inoratidza kuti tichaona sensor yeokisijeni yeropa, pamwe chete nepekurara yekutsvaga uye yehupenyu hwakareba bhatiri.
Iyo inotaurawo iyo S6 chip uye kukwanisa kuona hutano hwepfungwa, izvo isu tine chokwadi nazvo.
Pfungwa Hutano Hwakawanikwa Kuwanikwa
16 Kubvumbi 2020: Inogona kuona ramangwana Apple kuona kana iwe wadonha murwizi?
Sezvatakaona kubva pakuunzwa kwemoyo wekutarisa maficha, Apple inoda kugadzira Apple Watch mune chishandiso chinosimudzira hupenyu.
Zvinoenderana neApple patent, chigadzirwa chemunguva yemberi chinogona kuona mhando yemvura iri mukati mayo uye nokudaro ongorora kana wadonha murwizi kana mugungwa wozoongorora mamiriro ako. Semuenzaniso, kana wachi yako GPS ichiti uri mumvura yakadzika inogona kusetwa kuti vazivise zviremera.
Pachavewo newatchface nyowani inonzi Infograph Pro ine tachymeter ficha uyezve pachave nePikicha yekutarisa kumeso, futi. Vabereki vanogona zvakare kukwanisa kudzora vana 'Apple Watches futi uye paivewo neanongedzo eropa okisijeni yekuonekwa ficha, inoonekwa ne 9to5Mac.